NCA ရေးထိုးခဲ့တဲ့ KNU ဒေသမှာ နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၄၀ ကူညီခဲ့ဟုဆို | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း NCA ရေးထိုးခဲ့တဲ့ KNU ဒေသမှာ နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၄၀ ကူညီခဲ့ဟုဆို
epa06517394 Nippon Foundation Chairman Yohei SasaKawa (C) talks to media duringajoint news conference with New Mon State Party (NMSP) chairman Nai Htaw Mon (R) and Lahu Democratic Union (LDU) chairman Kyar Hkun Sar (L), in Naypyitaw, Myanmar, 12 February 2018. The NMSP and the LDU are expected to sign the Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) on 13 February. EPA-EFE/HEIN HTET
NCA ရေးထိုးခဲ့တဲ့ KNU ဒေသမှာ နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၄၀ ကူညီခဲ့ဟုဆို
NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးဖြစ်တဲ့ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဒေသမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၄၀ ၀ိုင်းဝန်းကူညီခဲ့တယ်လို့ နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့က နေပြည်တော်ရှိ Kempinski Hotel မှာ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဋ္ဌ MR. YOHEI SASAKAWA က ပြောကြားလိုက်တာပါ။
ဒါအပြင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့မှာ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ရှိနေတဲ့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီနဲ့ လားဟူဒီမိုကရက်တစ် အစည်းအရုံးတို့ရဲ့ ဒေသတွေက တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတွေအတွက်ကိုလည်း ၀ိုင်းဝန်းကူညီပေးသွားမယ်လို့လည်း ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
NCA ရေးထိုးခဲ့တဲ့ KNU ဒသေမှာ နီပှနျဖောငျဒေးရှငျး အမရေိကနျ ဒျေါလာ သနျး ၄၀ ကူညီခဲ့ဟုဆို
NCA လကျမှတျရေးထိုးပွီးဖွဈတဲ့ ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး KNU ဒသေမှာ အမရေိကနျဒျေါလာ သနျး ၄၀ ဝိုငျးဝနျးကူညီခဲ့တယျလို့ နီပှနျဖောငျဒေးရှငျးက ပွောကွားလိုကျပါတယျ။
ဖဖေျောဝါရီလ ၁၂ ရကျနကေ့ နပွေညျတျောရှိ Kempinski Hotel မှာ ပွုလုပျတဲ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ နီပှနျဖောငျဒေးရှငျး ဥက်ကဋ်ဌ MR. YOHEI SASAKAWA က ပွောကွားလိုကျတာပါ။
ဒါအပွငျ ဖဖေျောဝါရီလ ၁၃ ရကျနမှေ့ာ NCA လကျမှတျရေးထိုးဖို့ရှိနတေဲ့ မှနျပွညျသဈပါတီနဲ့ လားဟူဒီမိုကရကျတဈ အစညျးအရုံးတို့ရဲ့ ဒသေတှကေ တိုငျးရငျးသား ပွညျသူတှအေတှကျကိုလညျး ဝိုငျးဝနျးကူညီပေးသှားမယျလို့လညျး ပွောကွားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
Previous articleအမျိုးသမီး ကွန်မြူနစ် သူပုန်တွေကို နှိမ်နင်းရင် လိင်အင်္ဂါကို ပစ်ဖို့ ဒူတာတေး အမိန့်ပေး
Next articleတရုတ်ဝါရင့် နိုင်ငံရေးသမား ဆွန် ဇန်ကျိုင် အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ စွဲချက်တင်